साडी लगाएर रेस्टुरेन्ट जाँदा दिल्लीमा बबाल ! - Aarthiknews
एजेन्सी। दिल्लीको अन्सल प्लाजास्थित एक्विला रेस्टुरेन्टले एक महिलालाई साडी लगाएर आएको कारणले रोकेको आरोप छ। जब पीडित अनिता चौधरीले स्टाफलाई सोधिन् , किन साडी लगाएर आउन दिइएको छैन ? यसको जवाफमा कर्मचारीले भने कि साडी स्मार्ट क्याजुयल ड्रेसमा पर्दैन र त्यहाँ केवल स्मार्ट क्याजुयल ड्रेसलाई मात्र अनुमति छ।
अनिताले होटेल कर्मचारीसँग बहसको एउटा भिडियो पनि सेयर गरेकी छिन्। जस पछि यो मुद्दाले तहल्का मच्चाएको छ। यसबारे राष्ट्रिय महिला आयोगले दिल्ली पुलिसलाई पत्र लेखेको छ। आयोगकी अध्यक्ष रेखा शर्माले महिलाको आरोप साँचो हो भने रेस्टुरेन्टविरुद्ध कारबाही हुनुपर्ने बताएकी छिन्। यसको अतिरिक्त रेस्टुरेन्टको मार्केटिङ र पिआर निर्देशकलाई पनि २८ सेप्टेम्बरमा आयोग समक्ष उपस्थित हुन भनिएको छ।
रेस्टुरेन्टमा एक महिला विरुद्ध भेदभावको एक भिडियो सोसल मिडियामा भाइरल भए पछि मानिसहरू क्रोधित छन्। घटनाको भिडियो सेयर गर्दै लेखिका शेफाली वैद्यले भनिन् - महिलालाई साडी लगाएको कारण रेस्टुरेन्टमा प्रवेश गर्न दिइएन, किनकि परिचारिकाका अनुसार साडी स्मार्ट क्याजुयल होइन। यो अजिब कुरा हो मैले सुनेको छु!
अर्को सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, "स्मार्ट लुगा के हो? इसाई-मुस्लिम देशहरूमा साडीमा यस्तो प्रतिबन्ध छैन, तब भारतमा यस्तो मानसिकता किन? रेस्टुरेन्टको दर्जाको बारेमा पनि प्रश्नहरू उठाइएको छ।
महिलासँग दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा रेस्टुरेन्टले सामाजिक सञ्जाल मार्फत स्पष्ट पारेको छ। रेस्टुरेन्टद्वारा जारी एक बयानमा यो भनिएको छ कि हामी महिला सँग बस्नको लागी छलफल गरिरहेका थियौँ, यसै बिचमा उनी भित्र आइन र हाम्रा कर्मचारीहरूलाई गाली गर्न थालिन। उनले हाम्रो प्रबन्धकलाई थप्पड हानिन् ।